Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.5.5 Aoka etika
Ny fanentanana ho etika dia mihatra amin'ny fikarohana rehetra voalaza ato amin'ity boky ity. Ankoatra ireo olana ara-panazavana etsy ankapobeny-resahina ao amin'ny toko faha-6-dia misy olana ara-pitsipi-pitenenana manokana momba ny tetikasa fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny, ary noho ny fanavaozana ara-tsosialy ho an'ny fikarohana ara-tsosialy, ny olana dia mety tsy ho hita amin'ny voalohany.
Amin'ny tetikasa fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny dia sarotra ny olana momba ny fanonerana sy ny karajia. Ohatra, ny olona sasany dia mihevitra fa tsy mahagaga raha an'arivony maro no niasa nandritra ny taona maro tao amin'ny loka Netflix ary farany dia tsy nahazo onitra. Toy izany koa, ny olona sasany dia mihevitra fa tsy mety ny mandoa vola amin'ny mpiasan'ny laboratoara madinika. Ankoatra ireo tranga fanonerana, dia misy olana momba ny trosa. Tokony handray anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny avokoa ve ny mpandray anjara rehetra amin'ny gazety siantifika? Tetikasa isan-karazany no manatona fomba hafa. Ny tetikasa sasantsasany dia manome fanomezan-dàlana ahafantarana ny mpikambana rehetra amin'ny fiaraha-miasa; Ohatra, ny mpanoratra farany tamin'ny gazety voalohany Foldit dia "mpilalao Foldit" (Cooper et al. 2010) . Ao amin'ny tetikasam-pianakavian'i Galaxy Zoo, ireo mpandray anjara tena mavitrika sy manan-danja dia indrisy indraindray asaina ho mpiara-miasa amin'ny taratasy. Ohatra, i Ivan Terentev sy Tim Matorny, mpandray anjara roa avy amin'ny Radio Galaxy Zoo, dia mpiara-miombon'antoka tamin'ny iray amin'ireo taratasy avy amin'ny tetikasa (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Indraindray ny tetikasa dia manaiky fotsiny ny fandraisan'anjara tsy miara-miasa. Ny fanapahan-kevitra momba ny fitaterana dia mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny raharaha.
Ny famoahana mivantana sy ny famoahana angona angon-drakitra dia afaka mametraka fanontaniana sarotra momba ny fanekena sy ny fiainana manokana. Ohatra, i Netflix dia namoaka ny sarimihetsika ho an'ny rehetra. Na dia mety tsy ho hita miharihary aza ny sarimihetsika fimailo, dia afaka manambara vaovao momba ny fitiavan-tanindrazana ara-politikan'ny mpanjifa izy ireo, fampahalalana izay tsy nanaiky ny hampiroborobo ny vahoaka. Netflix dia nanandrana nanonona ny angon-drakitra mba tsy hampifandraisana ny olona manokana, fa herinandro vitsivitsy monja taorian'ny famoahana ny angona Netflix, dia ampahafantarin'ny Arvind Narayanan sy Vitaly Shmatikov (2008) (jereo ny toko 6). Ankoatra izany, ny mpikaroka dia afaka manangona tahirin-kevitra momba ny olona tsy misy fankatoavana. Ohatra, ao amin'ny tetikasa "Malawi Journal", ny resadresaka momba ny lohahevitra saro-pady (SIDA) dia nadika raha tsy nisy ny fankatoavan'ny mpandray anjara. Tsy misy na inona na inona ireo olana etika ireo dia tsy azo refesina, fa tokony hodinihina ao anatin'ny sehatry ny tetikasa. Tadidio fa olona "olona" no misy anao.